Sharaabka Cocola Ee Itoobiya Oo Wasakh Lagu Arkay Darteed Laga Joojiyay Jigjiga | Saxil News Network
Sharaabka Cocola Ee Itoobiya Oo Wasakh Lagu Arkay Darteed Laga Joojiyay Jigjiga
January 12, 2020 - Written by cali abdilaahi
Jig Jiga (Saxilnews.com):- Sharaabka Shirkadda Coca Cola ayaa laga joojiyey dawladda deegaanka Somalida, kaddib markii lagu arkay wasakh ku dhex jirta gudaha sharaabka Moorka ah.
War-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska Ganacsiga DDS, ayaa looga digay shacabka inay isticmaalaan sharaabka ay soo saarto shirkadda Coca Cola, kaas oo ay ku samayn doonaan baadhitaan si ay u ogaadaan waxa ay tahay wasakh lagu arkay.
War-saxaafadeedka kasoo baxay xafiiska ayaa waxa lagu yidhi:
“Waxuu xafiisku maanta qabtay shir uu hogaaminayay madaxa xafiiska ganacsiga iyo warshadaha DDS madane BASHIR SHAAFI shirkan ayaa loo hayay Ganacsatada ka ganacsata cocada.
Sida la xaqiijiyay waxay shabka ku dhaqan deegaanku ku arkeen wasakh sharabka looyaqaano soft drinks ee coca-cola iyo wax yaabaha lahalmaala ee aysoo Saarto shirkadaasi.
Cadaymo kadib waxaa laisla qaatay inloo diro laboratory wasak dani waxa ay tahay sida aysheegtay wakaalada loosoogaabiyo mageceeda FM HACA oo ah waxyaalaha ay wakaaladani u aas aasan tahay.
Hadaba dhawaan ayay ahayd markii uu xafiiska ganacsigu amar kusiiyay substationada qaybiya coca-cola da inayna iibinin cocada ilaa amar danbe inta shaybaadhku soobaxayo.
Hadaba qaarkamida ganacsatada oo eeganaya danohooda gaarka ah ayaa iskudayday in ay si qarsoodi ah u iibiyaan cabitaankan dabagalada ganacsiga ayana arkey Kadibna kasoo xidhay meelihii ay gaboodka ugu iibinayeen waan ognahay ganacsigu wuxuu yimaadaa marka lahelo caafimaad.
Hadaba inaga oo kaduulayna bad’qabka bulshadeena ayaa ganacsatadan looga digay inayna isku dayin inay Furaan meheradaha ayku iibin jireen ilaa inta ay doctoradu kasoo xaqiiyinayay wasakhdan caafimaad darada ku keeni karta shacab weynaha deegaanka Soomaalida.
Xafiiska Ganacsiga iyo Warshadaha DDS”
Xigasho: Jigjiga Online